ajụjụ Convair 580 FSX
11 ọnwa 4 izu gara aga #993 by sruble
Enwetara m 580 fsx na-adịbeghị anya. Nsogbu maka m bụ na enweghi vc ma ọ bụ panel 2d niile. A ga-enwe ekele dị ukwuu maka enyemaka ọ bụla. Daalụ
11 ọnwa 4 izu gara aga - 11 ọnwa 4 izu gara aga #994 by DRCW
Ndewo, Olee ụdị FSX ị na-agba? Ebu Igbe ma ọ bụ Steam? Ị na-agba ọsọ na nchịkọta DX10? Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ nke FSX, ọ bụ Ọkachamma? Ọ bụrụ na ị budata SP1 na SP2?
M na-eji akwụkwọ ntanetị ọlaedo nke FSX na-abịa na osooso, (SP1 & SP2). Enwetara m ụgbọelu a n'enweghị nsogbu. Enwere m VC ọrụ zuru ezu. Enweghi ụgbọ elu 2D dị na ihe nlereanya a. Onye okike ji oghere ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ime FSX. Ị ga-edeba aha (SP2 FSX) Na-enweghị SP1 na SP2, ụgbọelu a agaghị arụ ọrụ. Download ihe ndeputa a na-agba n'elu, ma ị ga-enwe ụgbọelu na-arụ ọrụ. Cheers!
Nchịkọta ikpeazụ: 11 ọnwa 4 izu gara aga site na DRCW.
11 ọnwa 3 izu gara aga #1004 by sruble
Ana m arụ ọrụ Steam, M uninstalled ya wee re-arụnyere na ọ na-arụ ọrụ ọma nwere vc. Daalụ
11 ọnwa 3 izu gara aga #1005 by DRCW
Obi ụtọ ịnụ na ọ na-arụ ọrụ .. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ 10 windo, lelee ịntanetị maka ihe niile a maara na FSX. Obi Ụtọ